क्याप्टेन बिजय लामाले भने हामी जस्तो पाईलटलाई सेकेन्ड चान्स’ हुँदैन ! - E ALL NEPAL
क्याप्टेन बिजय लामाले भने हामी जस्तो पाईलटलाई सेकेन्ड चान्स’ हुँदैन !
काठमाडौं । सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यूएस बंगला एयरको विमान दुर्घटना हुँदा २२ नेपालीसहित ४९ जनाको ज्यान गयो । यति धेरै मानवीय क्षति हुने गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रै भएको यो पहिलो दुर्घटना हो । यो दुर्घटनाको सन्दर्भमा हामीले विमान चालक सिनियर क्याप्टेन विजय लामासँग गरेको कुराकानीलाई आर्काइभबाट प्रस्तुत गरेका छौं । विमान चालक बन्ने विजय लामाको बच्चैदेखिको हुटहुटी हो । उनकै शब्दमा भन्दा विमान चालक नै बन्छु भनेर उनी पढ्थे, खेल्थे, हिँड्थे, सुत्थे, निदाउँथे र ब्युँझन्थे । ‘त्यतिबेला एउटा प्लेन आकाशमा उड्दा सिंगो काठमाडौंलाई थाहा हुन्थ्यो । म आकाशतिर हेथेर्ँ र कल्पिन्थेँ,’ विजय भन्छन् । उनलाई बाल्यकालमा विमानचालक बन्ने हुटहुटी पैदा गर्ने थुप्रै कारणमध्ये एक कारण हुन्-रामकुमार अकेला ।
रामकुमार अकेला (खास थर प्रधान) नामका व्यक्ति उनको घरमा धाइरहन्थे । एयरपोर्ट भन्सारमा काम गर्ने उनी सधै गोजीभरि चकलेट बोकेर आउने गर्थे । ‘यो प्लेनमा बाँड्ने चकलेट हो, प्लेनमा जति पनि चकलेट पाइन्छ,’ भन्दै विजयलाई खुवाउँथे । अकेलाको नजर चाहिँ हुँदोरहेछ विजयकी दिदी (ठूलोबुवाकी छोरी जुग्नु) तिर, जो विजयको घरमा बसेर पढ्थिन् । अकेलाले उनकी जुग्नु दिदीलाई पट्याएरै छाडे र पछि बिहे पनि गरे । विजयलाई भने ‘प्लेनमा त जति पनि चकलेट पाइन्छ’ भन्ने उनको शब्द महत्वपूर्ण लाग्यो । विमान चालक बन्नलाई सायद यो पहिलो उत्प्रेरक तत्व थियो भन्ने लाग्छ उनलाई । तर, बाल्यकालमै उनको आँखामा समस्या आयो । डाक्टरले उनलाई माइनस वाला चश्मा भिराइदिए । विजयले कतै सुनेका थिए, माइनस चश्मा लगाउनेले विमान चालकको लाइसेन्स पाउन सक्दैन । यसरी एउटा माइनस चश्माले उनको सपनाको भ्रुण हत्या गरिदियो । उनी अरु नै क्षेत्रमा बरालिन थाले ।
अलि ठूलो भएपछि विजयले फेरि सुने, चश्मा लगाउनेले पनि पावर हेरेर विमान चलाउन पाउँछ । उनको सपना फेरि जागाज्योति भएर ब्युँझियो । उनले आमासँग आफ्नो चाहना प्रकट गरे । आमाले तत्कालै उनलाई च्याप्प समातेर विजय गिरीकहाँ लगिन् । विजय गिरी त्यतिबेलाका चर्चित पाइलट थिए । बिहान जाँदा उनी भेटिएनन् । बेलुका फेरि गए आमाछोरा । विजय भेटिए । ‘विजय, विजय दाइलाई नमस्ते गर’ आमाले विजयलाई अह्राइन् । विजयले आज्ञापालन गरे ।
‘त, तिमी पाइलट बन्ने ?’ विजयले सोधे । ‘हो, सर । तपाईंजस्तै बन्ने हो,’ विजयले फूर्तिसाथ जवाफ दिए । ‘के पढ्दैछौ ?’ विजयले सोधे । ‘इन्डियामा आइएस्सी सकेर अहिले त्रिचन्द्रमा अंग्रेजी र पोलिटिकल साइन्स लिएर बीएस्सी पढ्दै छु ।’ विजयले झन् फुर्तिसाथ जवाफ दिए । गिरी चुपचाप कोठाभित्र छिरे । आमा-छोरा ट्वाल्ल परेर बसिरहे । एकछिनपछि हातमा पाँचवटा यमानका किताब बोकेर निस्किए विजय गिरी । उनले ती पुस्तक विजयका हातमा थमाए । विजय ट्वाँ परे ।
‘ल यी किताब पढ्न थाल,’ विजयले भने, ‘तिमी पाइलट बन्न सक्छौ । पक्का सक्छौ ।’ विजय भन्छन्, ‘सायद मेरो फुर्तिलो र आत्मविश्वास भरिएको जवाफ देखेर उहाँ प्रभावित बन्नुभयो । यो केटो पाइलट बन्न लायक छ भन्ने महसुस गर्नुभयो । नत्र कसैले आफूसित भएका किताब अरुलाई यत्तिकै किन दिन्छ ?’ विजयले उनलाई किताब मात्रै थिएनन् । एउटा अमेरिकी नागरिकको नाम, ठेगाना र फोन नम्बर पनि दिए । उनी थिए बीजे ज्याकलिन । उच्चारण गर्दा विजय नै सुनिन्थ्यो । अब झन् रमाइलो हुने भयो ! ‘यो मान्छेलाई मेरो नाम लिएर फोन गर्नु, तिमीलाई सबै सहयोग गर्छ,’ विजयले उनलाई भनेका थिए । किताबको ठेली र विजेको ठेगाना बोकेर विजय आमासँगै बाटो लागे ।
त्यतिबेला काठमाडौंमा फोन गर्न अहिले जस्तो ‘फ्री’ थिएन । एकाध ठाउँहरुमा ट्रङ्कल सुविधा थियो । अमेरिका फोन गर्दा मिनेटको एक सय ८० रुपैयाँ लाग्थ्यो । तीन मिनेटको पैसा पहिले नै जम्मा गर्नुपथ्र्यो । विजयले अहिलेको आरएनएसी बिल्डिङमा नै आएर तीन मिनेटको पैसा ३६० रुपैयाँ जम्मा गरे । त्यसपछि फोन नम्बर डायल गरे । थप पैसा थिएन, त्यसैले तीन मिनेटमा सबै कुरा सक्नुपर्ने थियो । फोन उठ्यो । ‘हाई विजे, दिस इज वियज । विजय, आक्स्ड मि टु कल यू ।’
उनले सासै नफेरी भने । ‘ह्वाट ? ह्वाट ?’ विजे अल्मलिए । विजयले फेरि त्यही लाइन दोर्‍याए, ‘हाई विजे, दिस इज विजय, विजय आक्स्ड मि टु कल यू ।’ रणभुल्ल परेका विजय च्याँठि्ठए, ‘आर यू किडिङ मी ?’
त्यसपछि विजयले विस्तारमा भन्नुपर्‍यो । उनले भने, ‘हाई विजे ज्याकलिन, दिस इज विजय लामा फ्रम नेपाल । क्याप्टेन विजय गिरी आक्स्ड मी टु कल यू, विकाउज आई वान्ट टु बी ए पाइलट ।’ उताबाट जोडजोडले हाँसेको आवाज आयो । बीजे डलरमा हाँसिरहेका थिए, यता विजयको तीन सय ६० रुपैयाँ पैसा चैट हुन लाग्यो । खास कुरा बोल्नै बाँकी थियो । त्यसपछि हत्तपत्त उनले भने, ‘म पाइलट पढ्न त्यहाँ आउँछु । मलाई आइ-ट्वान्टी र्फम चाहियो ।’ बीजे एस एस भन्दै थिए, फोन काटियो । त्यही फोनको भरमा बीजेले आइ-२० फर्म पठाइदिए । त्यसलाई भरेर विजयले उनैलाई पठाए । त्यसको केही समयभित्र उनी अमेरिका उडिसकेका थिए । उनलाई अमेरिका पठाउन बुवाले ६ हजार डलर कहाँबाट जम्मा गरे, उनले थाहा पाएनन् । यद्यपि त्यतिबेला एक डलर बराबर १० रुपैयाँ मात्रै थियो ।
ब्याचलरको पढाइ बीचमै छाडेर अमेरिकाको टेक्सास पुगे विजय । एयरपोर्टमै लिन आएका बीजेले उनलाई त्यो रात एउटा होटलमा लगेर राखे । भोलिपल्ट अफिस लगे । अफिसमा थुप्रै नेपाली युवाहरु उनले देखे । नेपालीहरु नै बस्ने एउटा अपार्टमेन्टमा उनलाई बस्ने प्रवन्ध मिलाइदिएका रहेछन् बीजेले । त्यहीँ बसेर उनले पढ्न थाले । ‘मसित जान्छस् ?’ पाइलटको तालिम लिइरहेका शशीधर पाठकले एक दिन उनलाई सोधे । उनले ‘जान्छु’ भन्ने जवाफ दिए । शशिधरले उनलाई आफ्नो पहिलो ‘इन्ट्रडक्टरी फ्लाइट’मा आफूसँगै राखेर उडाए । जहाजलाई हावामा चटकेले जसरी अनेक तरहले गोता खुवाउँदा विजय डराएनन्, बरु रोमाञ्चित बने ।
शशिधरले आकाशमा अंग्रेजी ८ अंकको आकार हुनेगरी जहाजलाई तोडमोड गरेर घुमाएर देखाए । विजयले आँखा चम्काउँदै भने, ‘वाउ’ ! विजयको पढाइ र तालिम अगाडि बढ्यो । उनले प्राइभेट पाइलटको लाइसेन्स लिए । तर, कमर्सियल, इन्स्ट्रुमेन्ट, मल्टिइञ्जिनको लाइसेन्स लिन बाँकी नै थियो । घरबाट ल्याएको पैसा रित्तियो । साथीहरु घरमा फोन गर्दै पैसा मगाउन थाले । उनलाई फोन गर्न मन लागेन । ‘हाम्रो आर्थिक अवस्था धेरै राम्रो थिएन । बुवाले जसरी-तसरी पैसा व्यवस्था गरेर अमेरिका पठाउनुभयो । त्यसपछि थप पैसा पठाउन सक्ने उहाँको क्षमता थिएन । फेरि मलाई आफ्नो लक्ष्य पूरा नगरी फर्किन पनि मन थिएन’ विजय सम्झन्छन् ।
विजयसँग अमेरिका जानासाथ किनेको एउटा थोत्रे टोयटा गाडी थियो । बेच्न चाहे पनि नबिक्ने अवस्थाको । उनीसँग हातमा थियो चार सय डलर । यता कोठा भाडा ४५० डलर तिर्न बाँकी थियो । विजय काम खोज्ने चक्करमा लागे । उनको सेक्युरिटी कार्डमा ‘नट भ्यालिड फर इम्प्लोइमेन्ट’ लेखेको थिएन । उनले एउटा पिजाहटमा वेटरको भ्याकेन्सी देखे । गए । फर्म भरे । प्यालेस्टीनी साहु रहेछन्, सलाह । सलाहले उनको फर्म हेरे । केही कुरा सोधे । विजयले खरर अंग्रेजीमा जवाफ दिएपछि प्रभावित बने झैं देखिए । एकैछिनमा जागिर पक्का भयो ।
‘भेरी गुड, भोलिदेखि काममा आउनू’ सलाहले विजयलाई भने । विजय खुशीले उफ्रिन मात्रै सकेनन् । जाँदाजाँदै सलाहले सोधे, ‘ग्रीन कार्ड त छ नि हैन ?’ विजय अक्क न बक्क परे । उनीसँग ग्रीन कार्ड थिएन । साँचो बोल्दा जागिर जाने । झूट बोल्दा आत्माले नदिने । उनलाई धर्मसंकट भयो । फ्याट्टै भने, ‘ग्रीन कार्ड त छैन ।’ प्यालेस्टिनी बोस एकाएक आगो भए । आफ्नो बहुमूल्य समय नष्ट गरेको भन्दै नानाथरी गाली दिन थाले । विजय रुन मात्र सकेनन् । ‘यू ब्लडी फूल इडियट, गेट आउट’ भनेर सलाह चिच्याएपछि केही हल्ला नगरी विजय हिँडे । हिँड्नुअघि सलाहले विजयले मुठ्टीमा राखेको फर्म खोस्दै फेरि एकपटक गाली दिए, ‘यू ब्लडी फूल इडियट । यू डन्ट निड दिस ब्लडी फूल…’ दिक्दार भएर विजय कोठामा गएर पसारिए । भोलिपल्ट बिहानसम्म पसारिएकै थिए । अपार्टमेन्ट रहेको साझा फोनको घन्टी बज्यो । उनैले उठाए । हेल्लो भन्नासाथ उताबाट गाली वषिर्यो, ‘यू ब्लडी फूल इडियट । ह्वाई आर यू लेट इन द अफिस । डन्ट यु नो द भ्यालु अफ टाइम ब्लडी फूल…।’
आवाज चिरपरिचित थियो, र पनि विजयले सोधे, ‘हु आर यू प्लीज ?’ ‘आई एम योर बोस, ब्लडी फूल ।’ विजय फेरि अक्क न बक्क भए । फेरि उताबाट बोस चिच्याए, ‘कम विदिन १८ मिनेट ब्लडी फूल, अदरवाइज यू आर फायर्ड ।’ फोन राखेर उनले हत्तपत्त पाइन्ट र टिसर्ट भिरे । अनि थोत्रो टोयोटा गाडी स्टार्ट गरेर कुदाए । ‘नर्मल स्पिडमा त्यहाँ पुग्न २५ मिनेट लाग्थ्यो । तर, मैले थोत्रो गाडी पनि यसरी कुदाएँ कि १६ मिनेटभित्रै अफिसमा हाजिर,’ विजय सम्झिन्छन् । अघिल्लो दिन मार गाली गरेर खेदेको प्यालेस्टीनीले भोलिपल्टै किन बोलायो त ? विजय भन्छन्, ‘आइ एम नट स्योर । तर, सायद मैले इमान्दार जवाफ दिएको देखेर पग्लियो होला । अरु सबैले जागिर पाउनका लागि ग्रीन कार्ड छ भनेर ढाँट्दा रहेछन् र भोलि ल्याउँछु भन्दै टार्दा रहेछन् । मैले ढाँटिन । यत्तिको इमान्दार मान्छे छाड्नु हुँदैन भन्ने सोच्यो होला । अर्को कुरा, म हेर्दा पनि स्मार्ट र अंग्रेजी राम्रो बोल्ने भएकाले प्लस प्वाइन्ट भएको हुनुपर्छ ।’ कार्यालय पुगेपछि प्यालेस्टीनी बोसले उनलाई शर्त राखे, ‘काम सुरु गर तर, एउटा शर्तमा । कसैले सोधपुछ गर्न आयो भने मैले बोसलाई ग्रीनकार्ड छ भनेर ढाँटेको हुँ भन्नु ।’ विजयले ‘ओके सर’ भनिदिए ।
वेटरबाट काम थालेका उनी चाँडै नै ‘डिस वासर’ मा बढुवा भए । त्यसपछि सिफ्ट सुपरभाइजर हुँदै असिस्टेन्ट म्यानेजर बने । अनि त प्यालेस्टीनी बोस ढुक्कले उनलाई पिजाहट जिम्मा लगाएर होलिडे मनाउन निस्कन्थे । पिज्जा हटमा जागिर खान थालेपछि विजयको पढाइले निरन्तरता पायो । हरेक विहीबार उनको तलब आउँथ्यो । उनी शुक्रबार आफु पढ्ने कलेजमा पैसा जम्मा गर्थे । बाँकी पैसाले खान बस्न र घुमफिर गर्न पर्याप्त हुन्थ्यो । पछि उनले वकिलहरुको सहयोगमा काम गरेर बस्न मिल्ने कानूनी कागजात नै बनाए । अनि, एउटा ग्यास स्टेसनमा पनि काम गर्न थाले । ग्यास स्टेसनमा उनले क्यासियरबाट सुरु गरे । त्यसपछि क्लर्क, असिस्टेन्ट म्यानेजर हुँदै ट्रेनिङ सुपरभाइजर बने । हातमा वाकिटकी लिएर नयाँ गाडी चढेर रवाफका साथ हिँड्न थाले । त्यतिबेला दुईतिरबाट गरेर महिनाको पाँच हजार डलर कमाउने गरेको उनी बताउँछन् ।
अमेरिकामा पाइलट कोर्स पूरा गरेर सन् १९८७ मा नेपाल आए विजय । अमेरिकामा उनले मल्टिइन्जिनसम्मको लाइसेन्स पाएका थिए । यहाँ आएपछि ट्वीनटरको तालिम पनि लिए । सोही वर्षको जून १ बाट उनले आरएनएसीमा को पाइलटको जागिर पाए । को-पाइलटबाट सुरु गरेका विजय क्रमश क्याप्टेन, इन्स्ट्रक्टर, चिफ पाइलट, सुपरभाइजर, सुपरीटेन्डेन्ट, ग्राउन्ड इन्स्ट्रक्टर, रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इन्स्ट्रक्टर र डेपुटी डाइरेक्टर भए । केही वर्षअघि मात्रै नेपाल एयरलाइन्सले उनीसहित केही पाइलटलाई एयरबसको तालिमका लागि फ्रान्स पठायो । अहिले एनएसीसँग रहेका ६ जना एयरबस कमाण्डरहरुमा विजय एक हुन् । पछिल्लो समयमा एनएसीले उनलाई ‘फ्लाइट अपरेसन इन्टरनेसनल’को उप निर्देशक बनाएको छ ।
‘तपाईं जीवनमा पहिलोपटक जहाज चढेको याद छ ?’ विजयलाई सोधियो – ‘अहो,’ उनले धाप मार्दै भने, ‘गज्जबको प्रश्न पो सोधियो ।’ तर दुखको कुरा उनलाई पहिलोपटक जहाज चढेको कहिले हो भन्ने याद थिएन । कत्ति गर्दा पनि सम्झन सकेनन् । नेपालमा पहिलोपटक जहाज उडाउँदाको अनुभव भने उनको मनमा ताजै छ । उनले क्याप्टेन एएस राणाको को-पाइलट भएर काठमाडौंबाट लुक्ला उडान भरेका थिए । रोचक के भयो भने जहाज लुक्ला नपुग्दै टावरबाट विजय लामालाई धेरै मानिसहरु पर्खेर बसेका छन् भन्ने खबर आइसकेको थियो ।
विजयलाई सेलिब्रेटीको रुपमा धेरै नेपालीले चिन्थे । त्यसैले उनलाई पाइलटका रुपमा हेर्न धेरै मानिसहरु लालायित थिए । लुक्ला विमानस्थलमा ओर्लेपछि मानिसहरुले विजयलाई माला र खादा लगाइदिएर स्वागत गरे । जबकि मुख्य पाइलट राणालाई भने कसैले वास्ता गरेन । ‘वास्तवमा त्यतिबेला मलाई निकै अप्ठेरो लागेको थियो । तर, पछिपछि त बानी नै भयो’ विजय भन्छन् । विजयले १५८० घन्टाको कोर्स पूरा गरेपछि जहाजको क्याप्टेन बने । त्यसपछि भने उनलाई त्यस्तो असहज परिस्थितिबाट गुज्रिन परेन ।
जोमसोमबाट फर्केर आउँदाको घटना विजय कहिल्यै भुल्न सक्दैनन् । उनको करिअरमै सबैभन्दा तनावपूर्ण उडान थियो त्यो । सामान्य अवस्थामा १८ मिनेट उड्ने जहाज उनले डेढ घन्टा उडाएका थिए । सो उडानलाई यसरी सम्झिन्छन् विजयः ‘मौसम निकै बिग्रेकाले काठमाडौंमा लगेर अवतरण गराउने अवस्था थिएन । त्यसैले मैले जहाज होल्ड गर्न थाले । निर्धारित समयमा जहाज अवतरण हुन नसकेपछि यात्रुहरुबीच खुल्दुली सुरु भयो । तर, निकै बेरसम्म पनि अवतरण गर्ने अवस्था नहुँदा को-पाइलट पनि आत्तियो । यात्रुहरु रुन कराउन र चिच्याउन थाले ।’ ‘यता, जहाजको इन्धन पनि खत्तम हुन लागेपछि जसरी भए पनि अवतरण गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अन्ततः मैले नअत्तालिइकन भरतपूर विमानस्थलमा जहाज अवतरण गराएँ । विमानबाट ओर्लेका यात्रुहरुले रुँदै मलाई अंगालो मार्नुभयो । कतिजनाले माटोलाई चुम्मा खाएर टाउकोमा लगाउनुभएको देखेँ । त्यतिबेला चाहिँ म पनि भावुक बनेँ ।’ अलिकति स्पेस चाहिन्छ, खुला राजमार्गमा पनि जहाज अवतरण गर्न सकिन्छ
विजय अगाडि भन्छन्, ‘जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि जहाजलाई सुरक्षित अवतरण गराउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास मलाई छ । अलिकति स्पेस चाहिन्छ, खुला राजमार्गमा पनि जहाज अवतरण गर्न सकिन्छ ।’ विमान उडाउनु धेरैका लागि असुरक्षित र जोखिमपूर्ण पेशा हो । तर, विजय भने यसलाई संसारकै सुरक्षित पेशा दावी गर्छन् । उडनका विविध पक्षबारे हाम्रो जिज्ञासाको जवाफ विजयले यसरी दिए ।
विमान उडाउनु भनेको प्राकृतिक नियमको उल्लंघन हो । गुरुत्वाकर्षणको नियमअनुसार कुनै पनि वस्तु माथिबाट तल खस्छ । तर, जहाज तलबाट माथि उड्नुपर्छ । सायद यसैले गर्दा यो कामलाई असुरक्षित मानिएको छ । अर्को कुरा, यो पेशामा सेकेन्ड चान्स हुँदैन । एउटा गल्ती भयो भने सकियो । सरी भन्नेसम्म मौका मिल्दैन । अरु पेशामा गल्ती गर्दा पैसा नाश हुन्छ,, तर, यसमा त जीवन नै समाप्त हुन्छ ।
जोखिम त केमा छैन ? कुन पेशा खतरामुक्त छ ? के तपाईंको पेशामा जोखिम छैन ? तपाईंले लेखेको समाचार तलमाथि भयो भने भोलि कसैले गुण्डा लगाएर तपाईंलाई मार्न पनि त सक्छ नि । म भन्छु, अरु पेशाको तुलनामा हाम्रो पेशा सबैभन्दा सुरक्षित छ । हामी पूर्ण दक्ष भइसकेपछि मात्रै एउटा जहाज उडान उडाउन पाउँछौं । अरु पेशामा जस्तो यसमा सम्झौता गरिँदैन । सानोतिनो कुरामा पनि हेलचेक्र्याइँ गरिँदैन । त्यसैले यो सुरक्षित छ । दुर्घटना भनेको मानवीय गल्तीले हुने हो । गल्ती नगरेसम्म दुर्घटना हुँदैन । जहाजको सेफ्टी जमीनबाट सुरु हुन्छ र जमीनमै आएर पूरा हुन्छ ।
मौसम बिग्रेका बेला । बाहिर डम्म भएर केही देख्न सकिएन, झल्याकझुलुक विजुली चम्कियो र जहाज हल्लिन थाल्यो भने यात्रुहरुमा त्रास पैदा भएको पाइन्छ । तर, हाम्रा लागि यी अवस्था सामान्य हुन् । मौसम बिग्रिँदैमा हामी अत्तालिदैनौं, किनकि हाम्रो तालिम नै त्यस्तै हुन्छ ।
यदि को-पाइलट आत्तिन थाल्यो भने कमाण्डरका लागि चिन्ताको विषय हुन्छ । त्यतिबेला पाइलटले को-पाइलटलाई पनि मोटिभेट गर्न सक्नुपर्छ । जहाजको इन्जिनमा कुनै प्राविधिक समस्या आयो भने पनि सबैभन्दा तनाव हुन्छ । एउटा दक्ष पाइलटको परीक्षा यस्तो बेला नै हुने हो । कुनै डरलाग्दो समस्या आयो भने यात्रुहरुलाई बताइँदैन । किनभने त्यस्तो बेलामा जहाज दुर्घटना हुन सक्ने डरले यात्रुहरु कहालिने मात्रै होइन, भित्रै भागदौडसम्म गर्न सक्छन्
सामान्यतया जहाज टेकअप गरेपछि १० मिनेटको समय संवेदनशील हुन्छ । यतिबेला सबैभन्दा बढी व्यस्तता हुने भएकाले आपसमा कुराकानी हुँदैन । निश्चित उचाइमा पुगेपछि जहाज स्थिररुपमा उड्न थाल्छ । यतिबेला सहजता आउँछ र मजाले गफ गर्न सकिन्छ । यद्यपि पाइलटले जतिबेला पनि चनाखो आँखाले अगाडि हेरिरनुपर्छ । यसैगरी जहाज ल्याण्ड गर्ने बेलामा फेरि व्यस्तता बढ्छ । ल्याण्ड गर्नुभन्दा १५ मिनेट अगाडिदेखि फेरि गफ हुन छोड्छ ।
म पूर्ण सन्तुष्ट छु । यति ठूलो आत्मसन्तुष्टि सायद अन्य कुनै पेशामा छैन ।
-साभारः अनलाइन खबरबाट
Previous article जीवनका यि यस्ता चार कुरा कसैलाई भन्न मिल्दैन थाहा पाई राख्नुहोस
Next article बझाङमा जिप दुर्घटना हुँदा ७ जना घाइते, चालकको अवस्था भने चिन्ताजनक